Esi Estriol (50-27-1) hplc ma98% | AASraw Nwa nwanyi Hormones
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol ntụ ntụ Usoro / Estriol ntụ ntụ
SKU: 50-27-1. Categories: Estradiol ntụ ntụ Usoro, Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Estriol powder (50-27-1), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Estriol ntụ ntụ bụ steroid estrogen, nke na-eme mgbe ọ dị ime, na-eme n'ime imeju nwa fetal na steroid androgen steroid nke otu n'ime atọ estrogen ovarian estriol na ndị na-adịghị ime ime ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara iche. Ugbu a, a na-ejikarị ya dị ka obere nwanyi na-enwe mmekọahụ.
Egwu na-esi ike na steeti
Ụdị Epeepe Estriol nke dị ụra
Molekụla Formula: C18H24O3
Ọbara arọ: 288.38100
Melt Point: 280-282 Celsius C (gbaa.)
Raw Estriol ntụ ojiji na steroid usoro
Estriol (CAS 50-27-1) bụ onye omekome a na-akpọ E3, nke aha ya bụ Ovestin.
Raw Estriol ntụ ntụ Usage
gụnyere maka nchịkwa ọnụ na nke nchịkwa. N'ahịa, enwere nkọwa nke 15mg / cream.
Ịdọ aka ná ntị na ájá dị na Estriol
E kweghị ka ị jiri Estriol mee ihe Ọ bụrụ na ị na - eche ahụ ma ọ bụ nwee mgbaàmà ndị a:
enweghi ọbara ọgbụgba;
ọrịa hyperplasia endometrial abughi aghara;
mara, nke a na-enyo enyo ma ọ bụ ọrịa kansa gara aga;
ndị a maara ma ọ bụ ndị a na-enyo enyo na-adabere na estrogen (dịka cancer cancer endometrial);
nke gara aga ma ọ bụ thromboembolism venous (vein thrombosis, pulmonary embolism);
arụ ọrụ ma ọ bụ nke na-adịbeghị anya thromboembolism (dịka angina, infarction myocardial);
nnukwu ọrịa imeju, ma ọ bụ nyocha imeju ume enweghị ike ịlaghachi na nkịtị;
Nchọpụta na-egosi na ọ bụrụ na etrogen, nke dị ala, na-edozi n'elu, ọ gaghị eme ka ọrịa cancer ma ọ bụ endometrium (uterine linin) na-adabere na ya .1-3 Otú ọ dị, inwe mmetụta estrogenic ike karị apụtaghị na estriol enweghi uru ọ bụla nke na-enweta estrogens ndị ka mma. Nnyocha ndị e mere na-egosi na ịdị omimi na-ebelata ihe mgbaàmà nke menopause, dị ka ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, ma nwee ihe nchekwa dị mma karịa atụlọtọ nke estrogens.
Raw Estriol ntụ ọka ahịa
Esi esi AASraw zụta Estryl ntụ ntụ (CAS 50-27-1)
AASraw na-enye 99% Estriol raw ntụ ntụ dị ka obere nwanyi na-ekpo ekpo na nwanyi na-abụghị nwanyi dị ime nke a na-enweghị ike ime.
Ntuziaka Na-eme Ka Esi Nsiri Ike nke Estriol:
1 nyochaa maka Estriol ntụ ntụ
Estriol ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi